Nwanyị onye Naịjiria eturula ugo mmụta mgbakọ na mwepụ na Sautu Afrịka
Otu nwanyị onye ala Naịjiria na-agụ akwụkwọ n’ogo ọka mmụta abụrụla onye a na-eṅomi eṅomi maka agụm akwụkwọ mgbakọ na mwepụ na mba Sautu Afrịka.
Ọkammụta Oghenetega Ighedo nke ala Naịjiria eturula ugo dịka nwanyị izizi nwetere nzere ọka mmụta PhD n’agụmagụ mgbakọ na mwepụ. O nwetere nzere a na mahadum UNISA, bụ University of South Afrika, n’olu bekee.
Mgbe ọ kwara ndị nta akụkọ okwu, Ọkammụta Oghenetega Ighedo nke mahadum Sautu Afrịka, kwuru si n’ihe mere n’ụmụ nwanyị anaghị enwe mmasị igụ ihe dịka mgbakọ na mwepu bụ na omenaala anaghị enye ha nkwado kwesịrị ekwesị.
Mgbe Ọkammụta Oghenetega Ighedo malitere ịgụ akwụkwọ na Sautu Afrịka, e nweghị onye gwara ya na-enwebeghị nwanyị onye ojii gụrụ mgbakọ na nwepu na mahadum ahụ. Nanị ugbu a ọ gụchara ka e meziri ka ọ mata na yanwa bụ nwanyị onye ojii nke mbụ nwetere nzere ọkammụta na mahadum ahụ.
Obianọ Akpọọla Okù Ka A Kwalite Asụsụ Igbo
Aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ akpọọla oku ka onye ọbụla bụ ezi nwa afọ Igbo t...
Otu na-ahụ maka ịkụziri ọhaneze ihe ha kwesiri ịma n'ala anyị bụ 'National Orienttion Agency' ngal...
Anyị Adịla Njikere Maka Nhọpụta Anambra -- INEC
Onyeisi ụlọ ọrụ INEC na-ahụ maka nhọpụta ọchịchị n'ala anyị, ngalaba steeti Anambra bụ Dọkịnta Nkw...
Andy Ụba Akatọọla Nkwatu Ndị 'SARS' na Ndị Ụmụnze
Onye nnọchite anya ọgbọ nka kwado Anambra Sawụtụ n'ụlọ ọgbakọ sineeti ala anyị, bụ maazị And...
Aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ enyela Igwe Gerald Mbamalụ asambado dịka eze ọd...
Ndị gọvanọ mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị nọrọ n'isi ngwụcha izu ụka gara aga wee nwee nzukọ dara...